देउवालाई नियुक्तिको आदेश भए अदालतले राजनीति गरेको ठहर्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल - Pahilo Click
देउवालाई नियुक्तिको आदेश भए अदालतले राजनीति गरेको ठहर्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल
June 28, 2021 |Pahiloclick
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवाको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि उनले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४६ सांसदको मुख्य माग राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसरी परमादेश जारी भएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बताएका हुन् । ‘निवेदकको माग ग्रहण गर्नु अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हुन्छ । यो असंवैधानिक मात्रै होइन न्यायालयमाथि समेत … राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायलयले हात हाल्नु हुँदैन’ उनले भने ।
विघटन बाध्यता हो
महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा नजानका लागि संसद विघटन गरेको जिकिर गरे ।
‘अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले गरेको होइन संविधानत: भएको विघठन हो । उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णय रोपर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिसंग द्वन्दमा जान्न भनेर उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो’ बडालले भने ।
सरकारले जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि अदालतको आदेश मानेको उनको भनाइ छ । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनी रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरको पनि उनले खण्डन गरे ।
‘ धारा ७६ (५) मा दुबैको दावी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्ने त ? विद्वान् मित्रहरूका अनुसार त धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने ओली त सदाबहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि । त्यसैले यो विघटन बाध्यता हो’ उनले भने ।
इजलासमा एक न्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रश्न गरे : राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत विश्वासको मत पाउने आधार के हो त ?
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार पनि दलीय समर्थन नै भएको दावी गरे ।
‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन । पछि जानुभयो’ उनले भने ।
बडालले नेपालमा पुनर्स्थापना भएको संसदले परिणाम दिन नसकेको दावी गरे । ‘इतिहास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना पछि देश ट्याकमा गयो ? ०५१ पछि हामीली के के देख्यौं, बहुदलप्रति वितृष्णा जाग्यो । पुनर्स्थापना भएर आएको संसदले परिणाम दिन सक्दैन’ उनले भने ।
२३ दिनपछि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा
गण्डकी प्रदेशमा परीक्षण गरिएका २५ प्रतिशतमा कोरोना
“हिजो आफैँ संघर्षका लागि लडेको स्थान आज सत्तामा पुगेपछि कसरी निषेधित हुनसक्यो’?
पाल्पामा बेहुली लिएर फर्किदै गरेको जिप दुर्घटना,पाँचको मृत्यु
निदान अस्पताल मिर्गौला प्रकरण: सीइओसहित ५ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश
संविधान संशोधनको कार्यसूची आजको संसद बैठकमा